Home Wararka Taliska Booliska Soomaaliya oo fariin udiray Masuuliyiinta ka tirsan Dowladda ee Musuqa...
Taliska Booliska Soomaaliya oo fariin udiray Masuuliyiinta ka tirsan Dowladda ee Musuqa ku kaca
Taliska Booliska Somaliya ayaa uga digay masuuliyiinta ka tirsan dowladda Federalka Somaliya inay ku kacaan falal musuq maasuq ah oo la xiriira xatooyada xoolaha dadweynaha.
Taliyaha Ciidanka Hoggaanka illaalinta Canshuuraha iyo dhaqaalaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed General C/laahi Xasan Bariise ayaa sheegay cid kasta oo isku dayda fal la xiriira xatooyo xoolo dadweyne in laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan.
Wuxuu sheegay inay xiran yihiin masuuliyiin kala duwan oo ka tirsan Hay’addaha dowladda, kuwaasi oo ay ku socoto Baaritaan la xiriira dhacdooyin eedeymo musuq maasuq ah.
“Cid kasta oo damaacin laheyd inay ku waano qaadato inay ogaato in loo soo jeestay oo isla xisaabtan yimid, in wax waliba sidii loogu talo galay sharciga uusan indhaha ka qabsan doonin, qof kasta ammaanada loo dhiibay sidii loogu talo galay ha uga soo baxo, qof kasta wixii loo dhiibay ee mushaarka xaqa uu kaga leeyahay inuu iimaansado, intaasi ayaan u gudbinayaa digniintaas ah.” Ayuu yiri Generaal Bariise.
Dowladda Somaliya ayaa muddooyinkaan dambe kordhisay hanaanka isla xisaabtanka shaqsiyaadka kala duwan ee ka tirsan dowladda, xilli masuuliyiin kala duwan lagu soo eedeeyay eedeymo la xiriira dhanka Musuq maasuqa.
Masuuliyiin kala duwan oo ka tirsan Dakadda Muqdisho ayaa xalay ku hooyday Xarunta Dambi Baarista Ciidanka Booliska Somaliyed, kadib markii xalay lagu eedeeyay musuq maasuq.
Previous articleRugta Ganacsiga oo war ka hadashay bur burinta ay ciidamada Kenya ku hayaan Xarumaha shirkada Hormuud
Next articleAdan Barre Ducaale oo iska fogeeyay xiriirka Fahad Yaasiin. Maxaa is badalay?